Aanaalee Gujii Lixaa lama keessatti namoonni 20 ajjeefaman - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Jiloo Keemee
Magaalaa aanaa Dugdaa Daawaa, Fincaa'aatti dhukaasa banameen mana gubachaa ture
Rakkoo nageenyaa Jimaata darbe Godina Gujii Lixaa, aanaalee Dugdaa Dawaafi Galaanaatti uumameen walumaa galaatti lubbuun namoota 20 yoo darbuu kanneen 18 ol ta'an ammoo madaa'uusaanii maddawwan hospitaalaafi aanga'ooti Godinichaa BBC'tti himan.
Manajarri Hospitaalaa Bulee Horaa Obbo Irdaa Roobalee namoota 12 aanaa Dugdaa Dawaatti du'an keessaa sagal rasaasaan, sadii ammoo ibiddaan gubatanii ta'u himan.
Jimaata darbe galgala sa'aatii tokko irraa eegalee gabaasni akka hospitaala isaanii qaqqabe kan dubbatan Manajarri Hospitaalichaa kun, garee tokko ijaaruun gara buufata fayyaa aanaa Dugdaa Dawaa bakka rakkoon kun itti uumametti erguun namoota ajjeefamaniifi madaa'anii wallaansa aasisaa turu dubbatan.
Kanneen wallaansa dabalataa barbaadan ammoo adda baasuun ambulaansiidhaan gara Hospitaala fidne jedhan.
Aaanaa Galaanaa irras akkasuma rakkoon walfakkaatu akka ture kan dubbatan Obbo Irdaan, namni tokko wallaansaaf gara hospitaalichaa yoo dhufuu namoonni ja'aa ol ta'an akka ajjeefaman dubbatama jedhan.
"Namoota miidhaman kanneen keessatti maanguddoo umuriin waggaa 70 ol ta'an tokko, daa'imman umurii waggaa 13 fi 15 ta'an keessatti kan argaman yoo ta'u, baayyeen isaanii dargaggoota," jedhan Obbo Irdaan.
Namoonni hanga kanaa baayyatan al-takkaatti miidhamuun, akkasumas rakkoo nageenyaa uumameen namoonni baqachaa waan turaniif gara hospitaalaatti fidnee wallaansa kennuu irratti rakkoon akka isaan mudatee tures kaasaniiru Manajarri Hospitaala Bulee Horaa.
"Sodaadhaan namoonni baqachaa waan turaniif namni bakka sana deemuu ni sodaatan. Warri bulchiinsaa illee deemuudhaaf fedhii hin qaban turan. Raayaan ittisa biyyaatu nama dha'a waan jedhameef namoonni gara magaalaa sanaa demanii nama gargaaruuf fedhiin dhibuudha rakkoon guddaan," jedhu.
Gama biraatiin Bulchaan Aanaa Dugdaa Daawaa Obbo Guyyee Basaayee Boruu akka jedhanitti, magaalaa aanaa kanaa Fincaa'aa jedhamtutti gaafa Mudde 19, naannoo sa'aatii 11 irraa eegalee dhokaasi jiraachuu argine jedhan.
Dhukaasii ammana hin jedhamne meeshaalee gurguddaan magaalaa keessatti akka baname kan dubbatan bulchaan aanichaa kun, dhukaasichi banameef sababin hanga ammatti adda kan bahe qaama mootummaafi qaama ABO waliin walitti qabachuu mul'ataa jirudha jedhan.
Uummati magaalaa keessatti suuqii isaanii gurguran, bitan, gabaatii galan kaan ammoo warruma karaa irra imala isaanii deeman kan lubbuun isaanii darbe akka ta'e himanii, "Namoota nagaa, uummata qulqulluu irratti badiin raawwatamee jira. Dhiiroota 12 fi dubartoota lama kan ta'an uummata fayyaalessa irratti badiin kun raawwatameera. "
Rakkoo qaqqabe kanaaf hanga ammaa namni to'annaa jala oole tokkollee akka hin jiru Bulchaan Aanaa Dugdaa Daawwaa kun kan himan.
"Motoroota /doqdoqeewwan 16 fi bajaajii tokko battalumatti magaaluma sanatti gubatan. Warri kana magaalaa keessatti raawwachaa turan qabatamaan raayyaa ittisa biyyaati," jedhu Obbo Guyyeen.
Walitti bu'insa marsaa gara garaatiin olluma magaalaa sanitti ABO waliin uumame sababa ka'umsaa godhachuun, namoonni akka ajjeefamanis kaasaniiru. "Marsaa duraa uumameen lubbuu namoota torba, marsaa lamaffaa irratti lubbuun namoota sadii, akkasuma ammoo marsaa sadaffaa kan Jimaata darbe kana uumammeen lubbuun namoota 13 aanaa keenya kana keessatti badeera."
Lubbuu namootaa darbaa jiruuf sababiin dhiyaatu qaamni uummata keessa taa'ee nutti dhukaasu jira kan jedhuun yoo ta'u, gidduu kanatti ammoo uummanni miidhamaa jira jedhan Obbo Guyyeen.
Namoota Jimaata darbe lubbuun darbe keessaa sadii dhukaasa baname baqachuun mana keessa jiran keessatti gubatan. "Manni itti baqatan suuqii beenzila qabu keessa waan galaniif yoo itti dhukaafamu ibiddi qabatee namoonni sadii gubatanii achuma keessatti hafan," jedhu Obbo Guyyeen.
Itti Gaafatamaan Bulchiinsaa fi Nageenya Godina Gujii Lixaa Obbo Dastaa Ittaanaas Jimaata darbe magaalaa Fincaa'aa keessa dhukaasni tureera jedhan.
"Dhukaasni kun qaamni hidhate naannoo sana ni jira. Akkasumas ammoo raayyaan ittisa biyyaa ni jira. Raayyaan ittisa biyyaa namoonni hidhatan uummata keessa dhokatanii waan nutti dhukaasaniif deebii sana kennuuf dhukaasne jedhan. Dhugaan jirtu gama lamaaniinuu dhukaasni ture kan jedhamee ka'u garuu qulqulleessuutti jirra.
Haa ta'uutii garuu, achillee ta'e as aanaa Dugdaa Dawaa keessatti qofa namoonni 13 ajjeefamanii 18 ammoo madaa'aniiru. Aanaa Galaanaa keessattis namoonni torba ajjeefamaniiru. Amma qaama kamiitu jalqaba dhukaase kan jedhu adda baasaa jirra," jedhan.
Warri raayyaa ittisa biyyaa osoo daandiirra deemanii namni wayii itti dhukaase kan jedhan Itta Gaafatamaan Bulchiinsaafi Nageenyaa Godina Gufii Lixaa kun. ABO yaa ta'an yaa dhiisan waanan beeku hin qabu garuu aanaalee lamaanitti nutti dhukaafamnaan deebii kennine jechuu raayyaa ittisa biyyaa ibsan.
Obbo Dastaanis namoonni miidhaman kun namoota nagaa turanii jedhan.
'Lammiileen gara Sudaanitti baqatan yeroo dhiyootti deebi'u'